Inqubomgomo Yokubuyisa -
YONKE AMASEBENZI AYIPHELEKILE, AYINYE AMAKHAYA. IZINHLANGANO ZIKHONA.
Ungakwazi ukukhansela i-oda lakho uma lenziwe phakathi kwamahora okuqala we-24. Ukukhansela kubhekwa njengembuyiselo futhi ngeke sihloniphe noma yikuphi ukukhansela ngemuva kwesikhathi se-24 hr. Ngokusekelwe ekuhlakanipheni kwethu singavumela ushintsho lwe-oda, uma sivumela ukuguqulwa kwe-oda kuyoba khona oda ukushintsha ukuphazamiseka kwemali ye-$ 15.
Isicelo sokushintshanisa kufanele kwenzeke ezinsukwini zokuqala ze-7 ngemuva kokuthi iphakheji lakho liye ithunyelwe. Ezimweni ezikhethekile ezisekelwe kuphela kwizindlela zami zendabuko zendabuko okukhethwa kukho kungenziwa. Ukuze ushintshe izinwele zakho zonke izinwele KUFANELE zibuyiselwe kungaziwa, zingaguquki nazo zonke amathegi nezitifiketi zingene phakathi kwezinsuku zokuqala ze-7 zokulethwa. Noma yikuphi ukuguqulwa kuzokuvimbela ukushintshwa kwezinwele. Lokhu kufaka kodwa akukhawulelwanga kunoma yikuphi izinwele eziye zahlulwa, zidibene, zihlanganiswe ngomunwe, futhi zihanjiswe. Noma yikuphi izinwele eziye zamanzi, ezidayiwe, ezihlanjululwe noma ezifakiwe zingahle zishintshwe
Isibonelo sesizathu esingeke sinikeze ukushintshaniswa ukuthi "Ngangifuna enye into" noma "lokhu kungekude nje ngangifuna" kuzomele kube nenkinga ebalulekile ngomkhiqizo noma iphutha elenziwe yi-MNHE. Izinwele ngumkhiqizo wokuhlanzeka, uma ushiye isikhungo sethu asikwazi ukuwusebenzisa noma ukuwuthengisa uma uvuliwe ngumthengi. Ngakho-ke inqubomgomo yethu yokushintshaniswa nokubuyiselwa kwemali isondelene.
Kukhona imali yokubuyisela ye-$ 20 yazo zonke izinzuzo ezivunyelwe, ukukhansela, kanye nokuhwebelana okuhlangabezana nezidingo zethu zokushintshanisa.
Ngomthetho we-LAW ne-Florida Health Regulations I-My Natural Hair Extensions LLC inesibopho futhi kudingeke ukuthi iphakamise lezi zindinganiso. Ngeke senze noma yikuphi okuhlukile.
Uma sinquma ukuvumela abathengi bokushintshanisa banomthwalo wemali yokubuyisela izindleko. UMNYE ngeke akhokhe noma abuyisele abathengi kunoma yikuphi ukubuyiswa kwemali yokubuyisela ngaphandle noma okufuywayo.
Njenganoma yimuphi inkampani, noma yikuphi ukuthengisa okuthengwe ngokudayiswa, nekhodi yesaphulelo, noma izinto zokukhangisa kuzobe sekuthengiswa kokugcina.
Shiya ukuphawula Khansela impendulo
Yebo, engeza ohlwini lwakho lokuposa